Shiinaha warshadda birta birta ah iyo soosaarayaasha | Taariikh
Isku-darka kiimikada ee birta martensitic ahama waxaa lagu gartaa ku darista walxaha sida molybdenum, tungsten, vanadium, iyo niobium iyadoo lagu saleynayo isku-darka isku-dhafka kala duwan ee 0.1% -1.0% C iyo 12% -27% Cr.
Waraaqaha Birta ahama
Isku-darka kiimikada ee birta martensitic ahama waxaa lagu gartaa ku darista walxaha sida molybdenum, tungsten, vanadium, iyo niobium iyadoo lagu saleynayo isku-darka isku-dhafka kala duwan ee 0.1% -1.0% C iyo 12% -27% Cr. Sababtoo ah qaabdhismeedka qaab-dhismeedku waa qaab-dhismeed dhumuc-udub dhexaad u ah jirka, awoodda ayaa si aad ah hoos ugu dhacda heerkulka sarreeya Ka hooseeya 600 ℃, xoogga heerkulka sare ayaa ah kan ugu sarreeya dhammaan noocyada birta birta ah, iyo xoogga gurguurta sidoo kale waa kan ugu sarreeya. Birta 440A waxay leedahay wax qabad aad u fiican oo demin iyo adkeyn ah, adkaansho sare, iyo adkaansho ka sarreysa birta 440B iyo birta 440C. Biraha 440B waxaa loo adeegsadaa jarista qalabka, qalabka cabbiraadda, sitaarada iyo filtarka. Birta 440B waxay ka adagtahay birta 440A waxayna ka adkaataa birta 440C. Birta 440C waxay leedahay adkeynta ugu sareysa dhammaan birta birta ah iyo birta u adkeysata kuleylka, waxaana loo isticmaalaa nozzles iyo bearings.
Inta badan ahama Steel Grade No. Waxaan keenay:
THIX x BILAASH XADHIGA IN MM
Birta 440A waxay leedahay damin heer sare ah iyo adkeyn, adkeysi sare, iyo adkaansho sare
Qalabka, cabbiraadda, oo sita hi-iska caabinta musuqmaasuqa
Birta 440B waxay ka adagtahay birta 440A waxayna ka adkaataa birta 440C.
qalabka goynta, qalabka cabbiraadda,
saa'idka iyo filtarka.
Birta 440C waxay leedahay adkeynta ugu sareysa dhammaan birta birta ah iyo birta kuleylka u adkeysata
nozzles iyo saa'idka.
Hore: SHIDDEY MIDAY
Xiga: TCT QABOW OO LOOGU TALAGALAY SOO DHAWEYNTA SAHALKA
Ahama Birta Fiiq Leh Meel Meey Dhow
Darajooyinka Birta ahama
Hss M2 Wareegyada Sawirada Wareegtada ah, Mashiinka Mashiinka Wareegga Wareega ah, Tct Wareegga Mashiinka Loogu Talagalay Birta, Hss M35 Wareegyada Sawirada Wareegtada ah, Tct Wareegga Wareegga Sawirka, Qalabka Shaqada kulul ee Birta Lagu Dhejiyo,